Fitaovana famolavolana sary ho an'ny vao manomboka | Famoronana an-tserasera
Tadidiko ny asa voalohany nananako teo amin'ny fiainako, nataoko ny manao ilay asa Social Media Manager amin'ny masoivoho nomerika. Mazava ho azy fa nanana hevitra sasantsasany momba ny zavatra tokony hataoko sy ny zavatra tokony ho niasa mafy kokoa aho, saingy tsy nanana ny hevitra hanombohana.
Inona avy ireo fitaovana tokony hampiasaiko, inona avy ireo fitaovana ilaiko? Ka nanomboka nitady ny lisitry ny fitaovana tsara indrindra afaka nanamora ny fiainako aho, izay afaka manampy ahy hahafantatra tsara kokoa ny tontolo vao nidirako ary izany no nahitako azy. fitaovana toa an'i Hootsuite na iray hafa izay nanampy ahy be dia be, antsoina hoe Buzzsumo ary androany dia mbola mampiasa ny roa aho.
1 Saingy, ahoana no fomba hialana bebe kokoa amin'ireo fitaovana ireo?
2 Lisitry ny fitaovana ilainao amin'ny voalohany
Saingy, ahoana no fomba hialana bebe kokoa amin'ireo fitaovana ireo?
Heveriko fa tsy maninona izay asa anananao satria mety mila fanampiana ianao amin'ireo fitaovana omena an-tserasera.
Tsy ilaina intsony ny milaza fa misy tsara fitaovana izay aloa na maimaim-poana ampiasaina, ny sasany izay hampiasainay mandritra ny herinandro ary ny sasany izay hampiasainay mandritra ny androm-piainany. Ary izany no antony nanapahako hevitra hitady fitaovana sasany mety ho tonga mora ampiasaina amin'ny dianao famolavolana sary.
Amin'ny maha mpitantana seo tsara ahy dia zava-misy fantatra fa mahavita zavatra betsaka kokoa noho ny atiny fotsiny aho, toy ny asa mpamorona sary. Noho izany, vao manomboka ihany koa aho ary ireto fitaovana manaraka ireto izay hampahafantariko anao dia ny sasany amin'ireo tsara indrindra ho hitanao ary nanampy ahy hamolavola ireo hevitra tao an-dohako.
Satria mila aingam-panahy kely ny tsirairay, andao atomboka ity fitaovana ity miaraka amin'ny fitaovana vitsivitsy izay afaka manome hery ny fisainanao ary manampy anao hanomboka amin'ny tetikasanao.
Lisitry ny fitaovana ilainao amin'ny voalohany
Raha resaka famolavolana aingam-panahy dia tsy misy toerana tsara kokoa hahitana sary samihafa sy mahatalanjona noho Mandrosoa.
Ao amin'ny Awwwards dia hahita ny tsara indrindra amin'ny tsara indrindra ianao, amin'ny maha-toeram-pivoriana, izay hanolorana ireo matihanina amin'ny famolavolana nomerika sy amin'ny alàlan'ny aingam-panahy, fahalalana sy traikefa, mba hampifandraisana sy hizarana tsikera mahasoa sy feno fanajana.
Ity pejy ity dia miasa ho toy ny motera fikarohana lehibe famolavolana, manangona loharanom-baovao manome aingam-panahy avy any Behance, Dribbble ary Designspiration.
Eto ianao dia afaka mamorona anao manokana foibe famoronana amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny tabilao momba ny toetranao. Tsotra, tsara tarehy ary manome aingam-panahy!
Raha mitady rindrambaiko tsotra ianao izay manampy anao mamorona mockups sy wireframes ary miaraka miasa miaraka amin'ny ekipanao na ny mpanjifanao amin'ny tena izy dia ity ny anao Fitaovana. Ny moqups dia mety raha mila manamboatra sary, modely na sary masina ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Fitaovana famolavolana sary ho an'ny vao manomboka